Nzira dzekugadzirira dzepamberi | Kubvumidza Mablog | Online Machira
musha » Blog » KUSHANDISA KUSHANDISA MITIMA IN COATING INDUSTRies
Iyo Industrial coating performance uye iyo hupenyu hwekutenderera inodomwa nemhando dzakasiyana senzira dzakaringana yekugadzirira nzira, kusarudzwa kwerudzi rwekupfekedza system, nharaunda, uye mutengo.
Maitiro eSurface Kurapa kana kugadzirira kweSurface kubvisa rust iripo, zviyero ,vekare machira, uye zvimwe zvinozivikanwa uye zvisingazivikanwe magakava (kunze kwemunyu, mafuta, mafuta, nezvimwe, izvo zvinoda humwe kurapwa kusati kwaitwa). Chikonzero chikuru chekurapa kwepasi chinowedzera kunamatira kubva kune substrate kune primer. Nguva dzose kuita uye kwakakodzera nguva yehupenyu hwekubika inosarudzwa nemhando dzekugadzirira kwepasi.
Maindasitiri edu ebhajidhi ane chekuita nenzira dzekugadzirira kwepasi yakakura iri kusarudzwa zvichienderana neprojekiti uye matanho anodiwa nevaridzi vedzimba. Pasinei neiyo substrate (Carbon Simbi, Isina Stire, Aluminium, Copper, Brass, Bronze, Titanium, Konkrete, nezvimwewo), iyo degree rekurapwa pamhepo rinosungirwa kwenguva yakareba kubatisa kutendeseka uye yakaringana corrosion kuchengetedzwa sekufunga.
In yedu Coating indasitiri, iyo Dry blast kuchenesa kwepasi kurapwa kunotaurwa seSandbever kana Grit kuputika kana Abrasive kuputika.
Ndedzipi dzese nzira dzeSurface yekugadzirira dzinotsanangurwa nevaridzi?
Ruoko Chishandiso kuchenesa nzira
Simba Tool yekuchenesa nzira
Dry abrasive blast kuchenesa nzira
Wet abrasive blast kuchenesa nzira
Hi-kumanikidza mvura jetting nzira
HAND TOOL KUSVIRA MUTSVIKI
Ruoko dhizaini yekugezesa inzira imwe yekugadzirira sosi substrate nekushandiswa kwezvinhu zvisiri-simba ruoko zvishandiso. Ruoko dhizaini kuchenesa rinobvisa zvese zvakasununguka pachiyero, rust yakasununguka, pendi yakasununguka, uye zvimwe zvakasununguka zvinopesana. Iyo haina kugadzirwa kuti ibvise zvakasimba inonamatira pachiyero pachiyero, ngura, uye pendi. International Standard SSPC SP-2 inotsanangudza zvakajeka kuti Mill muyero, ngura, uye pendi inoonekwa seinonamatira kana isingagone kubviswa nekusimudza nebanga rakaoma.
Chombo chekuchenesa chishandiso chinobatsira kugadzirira nzvimbo diki, nzvimbo dzisingawanikwe, kana nzvimbo dzakaomarara kana chimiro chakaomarara, uko kuchenesa kuputika hakugoneki kana kushomeka. Kune akawanda akasiyana maturusi aripo kugadzirira pamurume kugadzirira; zvimwe zvezvakanyanya kujairika zvinosanganisira ruoko waya bhurashi, Scrappers, chisel, nyundo, nezvimwe.
Rudzi rweMidziyo Yekushandisa Inoshandiswa:
Kushandisa kukanganisa ruoko zvishandiso kubvisa stratified ngura (ngura zviyero).
Uchishandisa kukanganisa ruoko zvishandiso kubvisa ese weld slag.
Kushandisa ruoko ruoko kupururudza, kubata ruoko, kupaza ruoko, kana dzimwe nzira dzisina-pesheni yekubvisa zvese zvakasununguka zvigayo, zvese zvakasununguka kana zvisina kuomerera ngura, uye ese akasununguka pendi.
Mareferensi akajairwa: Senge ISO 8501-1, Ruoko rweTool yekuchenesa tsika iSt 2 / As per SSPC, SSPC SP 2 ine hukama neyekushandisa ruoko nzira yekuchenesa iyo inogona kutumidzwa zvakakwana SSPC VIS-3 kana ISO 8501 inoonekwa mamiriro ekugadzirira pameso nemapati anobvumirana.
SIMBA SIMBA RINOKOSHESA MUTI
Simba rekushandisa kuchenesa inzira yekugadzirira simbi kumeso nekushandiswa kwemaoko-anobatsira ruoko maturusi. Izvo hazvibatanidzi kushandiswa kwe laser uye kupisa-kupinza matekinoroji. Chishandiso chemagetsi chakanatswa pamusoro, kana chichitariswa chisina kukura, chichava chisina mafuta emafuta emafuta uye mafuta uye chinogona kuve chisina huturu pamamirimita, cheya chakasununguka, pendi chakasununguka, uye zvimwe zvakashata zvinokuvadza zvekunze. Hazvina kuitirwa kuti adhent chigayo chiero, ngura, uye pendiabviswe nemaitiro aya. Mamirioni pachiyero, ngura, uye pendi anoonekwa seanonamira kana asingakwanise kubviswa nekusimudza nebanga rakaoma.
Rudzi rweMagetsi zvishandiso zvinoshandiswa:
Rotary waya brashi, Inoda Pfuti, Simba Grinders, Simba Sanders, Rotary kukanganisa kana Shandisa maturusi, Bristle Blaster, Rota peen, Flapper disc, nezvimwewo,
Mareferensi akajairwa: Senge ISO 8501-1, iyo Simba Tool yekuchenesa standard iri pa St / / Sezvo paSSPC, SSPC SP 3 inoenderana neIruoko turu yekuchenesa nzira iyo inogona kutumidzwa zvakakwana SSPC VIS-3 kana ISO 3 inoonekwa mamiriro ekugadzirira kwemukati pamusoro pemapato anobvumirana.
DZIMAI ZVINOGONESA BURE KUPEDZA
Inonyanya kukodzera uye inoshanda nzira yekudzivirira simbi substrates nekubatisa ndeye Abrasive blast kuchenesa. Izvi zvaifarirwa kana zvichigamuchirwa mune chero mapurojekiti, zvaizopa iyo yekuchenesa substrate nekubviswa kweiyo pende iripo, ngura, chigayo chehuremu, uye humwe kusvibiswa. Paunenge uchigadzira gadzira pasi, inogadzira roughness yemukati iyo inopa makemikari, mehendi, uye polar bonding kune yakaiswa coating.
Maitiro ekutsvaira kwekuputika kuchenesa anokanganisa chikamu chepasi neyakagadzirisirwa akanyanya masisitimu kuitira kuti abvise kusvibiswa kwese kuchenesa uye inoshanda substrate yekuzotevera kubatisa.
Nzira dzakasiyana-siyana dzekuputika kwekuputika kuri kuita muzvivakwa zvitsva zvekuvaka nekugadzirisa (kana zvichitenderwa nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza) uye idzo nzira pamwe dzinotsanangurwa mukujekerwa kweprojekiti. Kuti udzivise kunonoka kweprojekiti kana zvirevo, vatengi vanonyanya kushanda kana vashandisi havambotsanangudza "nzira uye nzira dzekuita gadziriro yepasi" iyo contractor inobvumidzwa inofanirwa kukumbira kuti ive nyore kuita nekushandisa.
Mhepo kuputika kana muchina kutenderera kuputika (wheel-abrator kana auto blasting muchina) ndiyo nzira mbiri dzakajairika dziri kushandiswa munzvimbo yekuvaka. Mhepo yekuputika kwemhepo inoitwa nemaoko uye michina inofambiswa iyo inogona kushandiswa kunenge chero nzvimbo, nepo auto blasting muchina we stationary zvishandiso uye capital capital yakakwira zvakanyanya nehupamusoro hwekugadzira.
SSPC / NACE - NACE # 1, 2, 3, 4 (batanidza Mibato)
TINOGONESA ZVINONYANYA Kupenya
Wet abrasive blast kuchenesa maitiro michina yakafanana Dry abrasive blasting zvishandiso, zvisinei, mune rakanyanyisa kuputika kuputika, izvo abrasive zvimisikidzwa zvinosanganisirwa mugero remvura. Nekuda kweiyo nuisance guruva (mhepo kusvibiswa) neoma yakaoma abrasive kuputika, yakanyorova abrasive kuputika nzira dzinosarudzwa nevatengi vazhinji kutonga zvinhu zvakatipoteredza.
Iko kusakosha kukuru kwekunyoroveswa kuputika kwemhepo kuchenesa kwakanangana neKuongorora kwakaoma kwazvo nekuda kwefusi ngura. Iyo yakanyorova nzvimbo inokurumidza oxidize uye inosiya yakaderera-yemhando nzvimbo yekubatira kugamuchirwa. Kuti uderedze kana kudzivirira oxidation, inhibitors yakatenderwa inogona kushandiswa nekutendera kwemutengi. Iyo inhibitors inofanirwa kuwirirana nejasi, kana zvisina kudaro, kukundikana kunamatira kunogona kuve kunogoneka.
MVURA YINONYANYA ZVINHU
Nzira dzekutambisa mvura dzakafanana nekunyorova kuputika kuputika kuchenesa neFlash rust inoratidzwa mune yakagadzirirwa nzvimbo. Kubatsira kukuru kwekubikwa kwemvura ndeye kubvisa zvese zvakasvibiswa zvinosanganisira zvigadzirwa zvemakemikari (kureva maSalts). Nzira yakanaka inoshanda yekubvisa munyu kubva pamusoro.
Iyo ichadzoreredza iripo mamiriro epasi (haisi kuzokuvadza chimiro chiripo muchirongwa chekugadzirisa)
Ichabvisa kusvibiswa kwakazara
Inoshanda kwazvo maitiro
Izvo hazvizogadzira chimiro chekumusoro
Mutengo wemidziyo wakakwira kwazvo
Nyanzvi yekushandisa yepamusoro inosungirwa
Yakanyanya njodzi nekuda kwekumanikidza kwakanyanya kunobatanidzwa
Rudzi rweMvura jetting
Yakadzika-yakadzvanywa mvura kuchenesa (LPWC) - pazasi 5000 psi
Yakakwirira-yakadzvanywa mvura yekuchenesa (HPWC) - 5000 - 10000 psi
Yakakwira-yakadzvanywa mvura jetting (HPWJ) - 10000 - 30000 psi
Ultra-yakakwirira kudzvanywa mvura jetting (UHPWJ) - anopfuura 30000 psi
Mareferensi akajairwa: SSPC VIS 5 - SSPC WJ 1, SSPC WJ 2, SSPC WJ 3, SSPC WJ 4
PrevpashureMUFANANIDZO PAKATI PEKUPENDA & KUSHANDA
NextKupfeka Vaongorori & Certification kushandisika mumaindasitiri eduNext